Time in ay la kulmaan ay isku naf, iyo waqtiga oo saxeexaa
トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ Time in ay la kulmaan ay isku naf, iyo waqtiga oo saxeexaa
Marka aad la kulanto saaxiibkiisa naf kasta oo kale oo soo jiidatay by nafta, waa marka aad dareemay Milanello ee midba midka kale. Waqtigaas waa faraqa u dhexeeya dadka qaar ka mid ah, dadka qaar la kulmaan ka badan sidii hore, waxaan jira dad ku kulmaan dhowr daqiiqo illaa qaangaarnimada.
Intaa waxaa dheer, haddii ay jiraan xitaa marka qofka waa ogyahay dareen in naf saaxiibkiisa, sababtoo ah mararka qaar ma aha, in fact, oo aan ka yarayn waa kiiska in aan la ogaaday waxa la kulmay.
Taas oo uu sheegay, wax sida waqtiga kulanka ay u badan tahay in saaxiibkiisa nafta, waxa la sheegay in dad badan oo tub nolosha qofka ee. Dadka aan la kulmay ee in sidoo kale waqtiga qofka uu noqday fursad aad ku bedelato jidka nolosha, aad ayay u badan tahay in ay yihiin ee nafta.
marka uu aqrinayo
saaxiibkiisa naf si ay isugu dayaan inay soo qabtaan calaamad in ay la kulmaan naf saaxiibkiisa waxaa la sheegay in uu yahay calaamad macno halkaas. Waxa aad ka calaamad samayn doonaa. Sida aan soo sheegnay cutubkii hore
dhibic ? jeestay, waa mid aad u badan tahay calaamad u tahay in la kulmo saaxiibkiisa Naf way idin soo salaamayaan tub aan nolosha. Tusaale ahaan, kala tagii ee shaqada iyo hawlgabka waqtiga, lover, sida marka ay timaado la ma oga dalka, marka deegaanka ayaa kor u beddelay si ay haatan inta badan waa uu doonaynin in ay waqtiga ku nool.
in laga war hayo xidhiidhka ka dhexeeya iyo aadanaha
hadda ma aha in ay la kulmay saaxiibkiisa nafta, sidoo kale waxaa suuro gal ah dadka aan la kulmay oo xidhiidh la leh dadka ku wareegsan waxaa ay isku naf. Ay xiriir la leeyihiin dadka, waxaa loogu tala galay in ama natiijada kulanka, sida maayo inaan aniga qudhaydu ka filan. Aware ee la xidhiidha sida a, haddii ay xumme tahay, waxaa laga yaabaa in ay ku turunturoodaan ee guud ahaan ay isku naf fursad kasta.
? wanaagsan ee dareenka shaqada
iyo nolosha marka aad la burqan, si togan uga hortagaan in wax naftaada Xataa marka dareen ayaa burqan in muda ah fursad aad ku la kulmi saaxiibkiisa naf. Marka
naftayda waxaa ka buuxa tamarta, aad soo jiidan laga yaabaa in naf saaxiibkiisa ah si ay u dareemaan Milanello. Dareenka iyo shaqo adag, waayo, wax kasta, marka dareen ayaa soo baxeen in aad rabto inaad beddesho iyaga u gaar ah ilaa iyo haatan, aynu miyir kulan ee dadka.
waqtiga si ay ula kulmaan wax muhiim
saaxiibkiisa naftayda si aan loo seegi waqtiga inta badan waa guul u fudud si loo fahmo sida kor lagu sharaxay. Taas oo uu sheegay, haddii ay jirto wacyi-jiro in uu soo jiitay in saaxiibkiisa nafta, waxaa sidoo kale u mari lahaa lama dareemo.
Sidaa darteed, xiisad antenna mar walba raadinaya naf saaxiibkiisa, aynu isla miyirka xasaasi ah inay soo qabtaan dareenka of markii soo horjeeda ayaa u muuqday hore ee indhaha. Iyo in ka badan wax, waxaa muhiim ah in maalin walba qaataan ay qabaan tamar togan.